Echiche ndị a na-ahụkarị na steeti anabolic ụwa | AASraw
/blog/gallery/Echiche ndị a na-ahụkarị na steeti anabolic steroid
Ihe na 10 / 12 / 2019 by 阿斯劳 dere na gallery.
Nke a ga - abụ nchịkọta zuru oke maka ebumnuche izugbe naanị, abụghị otu esi eduzi. Nke a apụtaghị na m kwadoro iji ya eme ihe ma ọ bụ na ọ bụ nnabata ojiji.
Ọtụtụ mgbe, ghọtahiere ma ọ bụ ghọtahie ya- enwere ụdị steroid dị iche iche. Corticosteroids, nke nwere mmetụta ọjọọ karịa karịa Anabolic Steroid, n'ihi ihe ụfọdụ mgbasa ozi adịghị ekwenye na iji ya eme ihe n'ezie A NA-ANAKWE N'ọtụtụ oge- gụnyere egwuregwu ọkachamara na kọleji. A na-ejikarị ha alụ ọgụ mbufụt. E nwekwara Progesterone nke a na-eji n'ọtụtụ ụdị nchịkwa ọmụmụ ma were ọtụtụ nde ndị inyom na-ewere kwa ụbọchị. Anabolic steroid (nke a na-akpọ AS ma ọ bụ AS) bụ ihe ọtụtụ mmadụ na-eche banyere mgbe mbụ ha nụrụ “steroid” na ihe ọjọọ niile metụtara ha.
Onye ọ bụla na-enwe akụkụ dị iche iche. Ọ dịghị mmadụ abụọ yiri ibe ha. Ikwu na mmadụ nile ga-ahụ otu ihe bụ ihe nzuzu. Peoplefọdụ ndị nwere oge siri ike ịghọta nke a dịka a hụrụ na eri nke atụrụ. Enwere naanị otu mmetụta-n'akụkụ na ihe niile * nwoke * ọrụ na-ekwe nkwa- na nke ahụ bụ testicular atrophy.
A) Atetọ ọnwụnwa - mgbe ị na - etinyekwu ego nke ya testosterone HPTA ahụ gị na-amalite imechi (kwụsị imepụta Testosterone n'ihi na ahụ gị na-agbake karịa nke ọma); Na nkenke nke a na - eme ka bọọlụ gị belata. Imirikiti oge anaghị ahụ ya anya. Enwere ike 25% Mbelata, 50% na ọtụtụ. Ozugbo ịlachara, na-agba ọsọ PCT gị (usoro ọgwụgwọ na-aga n'ihu) ha ga-alọghachi n'ogo zuru oke. Ọ naghị adịgide adịgide. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-agba HCG (Human chorionic-gonadatropin) mgbe ha na-agagharị na-echekwa bọọlụ ha ka ha buru oke ibu ma ọ na - enye aka na mgbake n'ihi na ọ na - eme ka sel gị leydig na - arụ ọrụ.
B) Isi nkwọcha / ntutu isi: AS anaghị akpata isi nkwọcha. Agbanyeghị, ọ nwere ike mee ka usoro a dị ngwa. Ọ bụrụ na ntutu isi na-agba n'ime ezinụlọ gị, ihe ijuanya na ọ ga-abụrịrị onye ga-eme ka usoro a dị ngwa. Bill Roberts dere banyere ụdị Steroid abụọ dị iche iche- Idị nke I na IIdị nke Abụọ; Idị m ịbụ ogige ndị kachasị dị ka Testosterone, Tren, Decca, Sust, wdg na anddị II dị ka Winstrol (stanazolol), dbol, anavar, Masteron wdg. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ụta ọgwụ ọjọọ dịka Winstrol na Masteron Enanthate (Drostanolone) dị ka onye na-akpata ntutu isi ma gbalịa izere ọgwụ ndị ahụ mgbe ị na-eche banyere MPB, mgbe nke ahụ abụghị eziokwu- ụdị m nwere mmetụta pụtara ìhè karịa na MPB (isi nkwọcha nwoke) karịa ụdị ọgwụ ndị ọzọ. O doro anya na ọgwụ ndị DHT (dị ka deca) ga-aka njọ n'isi gị. Nanị ụzọ ị ga - esi lụsoo nke a ọgụ bụ site na ịnara Finasteride (propecia / proscar) ụfọdụ ụdị ihe eji eme mmiri na ihe ndị ọzọ.
C) Acne- ụfọdụ mmadụ tiwapụ n’ihu ha; ụfọdụ ndị mmadụ na-apụta n'obi ha ma ọ bụ n'azụ ha… na ụfọdụ ndị na-ekpochapụ akpụkpọ ahụ n'ezie. Ọzọkwa, a na-emetụta onye ọ bụla n'ụzọ dị iche.
D) Ọ dị m ka a kpuchiela nke a n'okpuru atrophy testicular yana m chefuru echefu. Ọtụtụ oge m na-anụ ka ndị mmadụ na-ekwu maka AS na-eme ka dick gị daa, mgbe ha pụtara bọọlụ gị. Ya mere, iji dokwuo anya, dick gị adịghị ada mbà na nke ahụ na-eme ka uche dị ukwuu dị ka ịsị ị takingụ ihe ntanye imi na-ebelata imi gị. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, na-agbanyekwu ọbara na-aga n'ógbè ahụ, m ga-asị na ị ga-adịrịkarị mfe na-emeghị. Ọzọ ọ dabere na ogige ị na - a someụ- ọgwụ ụfọdụ dịka Deca na Tren nwere ike ịdị oke ike na libido gị (yabụ ahịrịokwu ahụ, "deca-dick") na ụfọdụ ụmụ okorobịa họọrọ ị takeụ Tadalafil (Cialis) (171596-29-5) ma ọ bụ viagra (ịkwesighi) mana ọgwụ ndị ọzọ dịka nnwale (ụdị ọ bụla) ma ọ bụ dbol ga - eme ka ị rịgo mgbidi ma nwee agụụ mmekọ dịka… .. Ọtụtụ ụmụ agbọghọ ndị nwere di ma ọ bụ enyi nwoke nwoke na okirikiri yiri ka ọ na-enwe obi ụtọ na nwa okorobịa ha na-aga, lol.
E) “Roid-rage” - Enweghị ụdị ihe ahụ. Ọ dị mfe dị ka nke ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-adịghị akwụsi ike, ee, ha ga-eme ka ị nwekwuo ntụkwasị obi. Ma ọzọkwa, ọtụtụ ihe ndị ọzọ na ọgwụ nwere ike ịkpata nke ahụ kwa. Ọ bụrụ na ị na-echeghị echiche ma ọ bụ na-achọpụta na ị nwere nsogbu uche, ị gaghị atụle ị takingụ ọgwụ steroid. Ọ dị m ka ya bụrụ na a ga-ekwu otu ihe ahụ banyere mmanya. Imirikiti ndị mmadụ anaghị emetụta nke a. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ha nọ n’ọnọdụ ka mma ma ọ bụ na ha adịtụghị iche. M nwere ike ịhụ ndị mmadụ ma eleghị anya, na-n'ike mmụọ nsọ n'ihi na ha bụ obere ibu na ntakịrị ike, ma e wezụga na nke ahụ, ihe ọ bụla na-akọ “roid-rage” (ọchịchị ma ọ bụ na ọ bụghị) bụ horseshit.
F) Ọnwụ / akụkụ ọdịda / wdg.
Steroid anaghị eme ka ndị mmadụ nwụọ ma ọ bụ duga na ọnwụ ha n'ihi mmeghachi omume na-adịghị mma. Enweghi omumu sayensi nke gosiputara uzo di nkpa na ndi steroid. Ndị mmadụ ga-arụtụ aka na Zyzz, mana ha agaghị arụtụ aka na akụkọ ntolite nke ezinụlọ ya banyere ọrịa obi / ọnọdụ obi echeghị na etinyegoro autopsy n'ihu ọha? Iji kwuo ọnụ ọgụgụ CDC site na 2005 si Nnukwu Ọsọ Dị Ike:
Ndị mmadụ 75,000 otu afọ na-anwụ site na Mmanya na-egbu egbu
Ndị 435,000 otu afọ na-anwụ anwụ n'ihi ụtaba
na ọnwụ site na steroid nke anabolic ……: 3
Ihe egwu dị na steroid bụ Vidiyo dị oke agbu. Yiri nke ukwuu na ọnọdụ na Pitbulls. Ọtụtụ mmadụ na-anwụ kwa afọ n'ihi ube na isi ma ọ bụ daa na steepụ.
Ee, ọ bụrụ na a na-eme steroid n'ụzọ na-ezighi ezi ọ nwere ike ịdị egwu. Oral steroid (dị ka dbol, winstrol, anavar, wdg) bụ hepatoxic na nwere ike ịbụ ihe siri ike na imeju gị ma ọ bụrụ na ewere ya na oke dosages na ogologo oge… ma ọ bụrụ na ị na-a alcoholụ mmanya mgbe ị na-aga. Nke a bụ ihe kpatara eji atụ aro ka ịmebe ogwe ọbara tupu oge, n'oge, na mgbe okirikiri. Thingsnara ihe dị ka ahịhịa ogwu nwere ike inye aka belata ibu na umeji gị.
Ọbara ọbara nwere ike ịrị elu, ọ ga - agbadata, wee dabere na kọlọm ndị ị na - ewe Methandrostenolone (Dianabol) ntụ ntụ na EQ). Rice riceụ osikapa yist na-acha uhie uhie nwere ike inye aka mee ka cholesterol na BP nọrọ na nche. O doro anya na ọ dị mkpa ka nyochaa. Ma ọ bụ n'ezie ihe kpatara na ị ga-eri ọcha dị ọcha mgbe ị na-adịghị eri nri Pizza, burgers, na fries.
Echiche ndị ọzọ
Ndị na-agwọ ọrịa na-ewere intramuscularly- ọ bụghị intravenously. Onweghi ihe ichapu ihe ijiri aka gi ma obu ihe obula. Ọ bụrụ na ị gbanye n'ime akwara ma ọ bụ na-agwụcha akwara ị nwere ike ịnwụ. E nwere ụfọdụ saịtị ịgbawa agbawa- nke kacha dịrị nchebe bụ belt, quads, glutes, na saịtị ventro-gluteal. Ndị mmadụ na-echekarị ịnyịnya ibu / glutes bụ saịtị kachasị nchebe, agaghị m ekwenye na ebe ọ bụ na ọ siri ike iru na n'ihi na akwara sciatic na-agbadosi nso na mpaghara ahụ ma ọ bụrụ na ị rute nke ahụ, nwee obi ụtọ na ndụ gị niile.
Steroid bụ ma ọ bụghị ọgwụ ọrụ ebube. Nwere ike ịnọdụ ala n’ihe ndina ma rie nri nduku ma eleghị anya ị ga-abawanye, mana ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị ga-eme mgbe ị na-ewere ha, ị gaghị echefula imefusị ego gị. Ka ga-arụ ọrụ ahụ. Ma ga-eri ihe dị ọcha - m ga-asị na ọ dị ọcha karịa. Ka nwere anya na ihe niile.
Homonụ pro abụghị ihe nchekwa-ọzọ maka steroid ebe ị nwere ike ịzụta ha na GNC / Complete Nutrition / anywhere. Ha dịkarịsịrị ize ndụ na oge ụfọdụ ịnweghị ike ịzụta ezigbo ọgwụ PCT n'ebe ahụ, mgbe ahụ ị nọ maka ụzọ n'ezie, ụzọ siri ike ịgbake- ma ọ bụrụ na ị gbakee ma ọlị. Otutu umuaka ejirila TRT mee ihe na ndu ha n'ihi nke a. Aghọtaghị m otú e sibeghị ikpe mgbe ikpe megide ụlọ ahịa ndị a.
Ozi Nduzi Na Lenvatinib Maka Ọrịa Cancer - AASraw
MK-677 (Ibutamoren) ọ na-arụ ọrụ nke ọma Maka Ọkpụkpụ akwara? Nyocha Sarm [NEW] Ntuziaka yingzụcha Ihe zuru ezu Maka SARM SR9009 Bodybuilding